Maamiloo agarsiisa islaayidii uumu
Islaayidii pirezenteshiini ammaa waliin fayyadamuun fedhii dubbistootaa guutuuf agarsiisa islaayidii maamiluumuu dandeessa.
Agarsiisa islaayidii maamiloo uumuufi.
Agarsiisa islaayidi – Agarsiisa Islaayidii Maamiloo fili.
Haaraa cuqaasiti sanduuqa Maqaa keessatti agarsiisa islaayidii keetiif maqaa galchi.
Islaayidii Amma Jiran jalatti, islaayidoota agarsiisa islaayidii keetitti dabalu barbaaddu fili, kana booda qabduu >> cuqaasi. Hangi islaayidootaa filachuuf jijjiirraa gadi qabi ykn islaayidoota baay'ee filachuuf Ctrl gadi qabi.
Islaayidoota Filataman jalatti islaayidoota harkistee kaa'uun, sadarkaa islaayidootaa agarsiisa islaayidii keeti keessa jiran jijjiiruu dandeessa.
Agarsiisa islaayidii agarsiisa jalqabuuf:
Agarsiisa islaayidii – Agarsiisa Islaayidii Maamiloo fili.
Tarree keessaa agarsiisa jalqabu barbaaddu fili.
Yemuu sajjoo Agarsiisa Islaayidii kan kamkaa pirezanteeshinii innaa cuqaastu ykn FS dhibdu agarsiisni islaayidii maamiloo akka simul'atu yoo barbaadde, Agarsiisa Islaayidii Maamiloo fayyadami fili.
Dirqaloota Agarsiisa Islaayidii adeemsisuuf fayyadan
Yeroo hunda agarsiisa islaayidii islaayidii ammaarraa jalqabuuf:
Bal'ina Dhiyeessa jalqabi keessa, saanduqa too'annoo Yeroo mara fuula ammee waliin fili.
Agarsiisa islaayidii maamiloo adeemsiisuu yoo barbaaddee, dirqala kana hin filatin.
Mul'annoo – Fooyyaa Islaayidii fili kana booda islaayidii (loota) dhoksuu barbaaddu fili.
Agarsiisa Islaayidii – Islaayidii Mul'isi/Dhooksi fili.
Islaayidichii galmee keeti keessaa hin haqamne.
Islaayidii dhookataa mul'isuf:
Mul'annoo – Fooyyaa, islaayidii fili kana booda islaayidii (loota) dhooksuu barbaaddu fili
Title is: Maamiloo agarsiisa islaayidii uumu